पुरानै मादलमा नयाँ खरी | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home बिचार पुरानै मादलमा नयाँ खरी
पुरानै मादलमा नयाँ खरी
रामप्रसाद गौतम ।
नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा हुँदै छ । यो नितान्त एक व्यक्तिको सोचबाट निर्मित पार्टी हो । सोच तथा सिद्धान्त कति व्यक्तिले लेखे भन्ने प्रश्न त्यत्ति महŒवपूर्ण हुँदैन, जति त्यो सिद्धान्त अनुपालन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अनुयायीको संख्या महŒवपूर्ण हुन्छ । सिद्धान्तभन्दा पनि अनुयायीको संख्याले पार्टी सृजना गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि धेरै ठाउँमा देखिएको छ । अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टीको मुख्य सिद्धान्त पुँजीवाद नै हो । तर, दुवै कार्यक्रमको आधारमा टिकेका छन् । भारतका २ ठूला पार्टी भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस दुवै प्रजातान्त्रिक पुँजीवादी हुन् तर अलिकति धार्मिक ‘आइडोलोजी’ले गर्दा दुवै अस्तित्वमा छन् । भाजपाले हिन्दुत्वको ‘सेन्टिमेन्ट’माथि राजनीति गर्दछ, कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता र स्वतन्त्रताको भल छोपेर वंशवादका फाँटमा रोपाइँ गर्दछ ।
नेपालमा ०४६ सालदेखि आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले पुँजीवादी र स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको मत प्राप्त गर्दछ । नेकपा एमालेले क्याडरबेसको सिक्रीमा बल्झाएर एनजीओ, आईएनजीओ, सहकारीलगायतको संस्थागत धारलाई बडो चतु¥याइँका साथ पार्टीकरण गर्न सकेको छ । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध, गणतन्त्र, समावेशी र समानुपातिकको रहलपहलबाट आफूलाई जगाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अन्य पार्टीले किलाकाँटीको काम त गरिरहेका होलान् तर खासै कुनै निर्णायक जनाधार बोकेको जस्तो प्रतीत हुँदैनन् । कसैलाई धर्मले जगाए होला र कसैलाई क्षेत्रले, त्यो अर्कै कुरा हो । यसैबीच नयाँ शक्ति भन्ने पार्टी खोलिएको छ । यो पार्टी कुन पृष्ठभूमिमा कसरी राजनीति स्थापित हुन्छ, त्यो त भोलिका चुनावहरूले देखाउलान् तर समकालीन समाजमा यो पार्टीको कुनै अस्तित्व र आवश्यकता कसैलाई महसुस हुनेगरी छजस्तो लाग्दैन । यसको अर्थ पार्टी छैन भन्न खोजेको होइन । संसारमा हुँदै नभएका बच्चा जन्मेर साढे सात अर्ब जनसंख्या पुगेको हो । त्यसैगरी नयाँ शक्तिले पनि पार्टी जन्माएर जनपक्षीय अधिकारका लागि लडेर आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्नका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
हजारौं गुराँसका फूलहरूमध्ये एक–दुईवटा मात्र भगवान्को शिरमा पुग्दछन्, अरू बिलाएर जान्छन् । त्यसैगरी बाबुराम भट्टराई पनि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनीहरूको पालामा एकपटक राजस्व बढी उठ्यो र अर्को पटक काठमाडांैको बाटो चौडा भएको हो । परन्तु संविधान त बनेन । चौकीदारले राम्रो सपना देख्यो भनेर कसरी पुरस्कृत गर्न सकिन्छ र ? ६ महिनाका लागि संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थपेर जसरी हुन्छ, संविधान बनेको भए परिणाममुखी प्रधानमन्त्रीमा स्मरणीय हुने मौका थियो, जुन बाबुरामबाट गुमेकै हो । अब पनि विगतका फराकिएका सडकको अन्तःशुल्कबाट पार्टी बन्छ भन्ने सोचेका हुन् भने गलत हो । यदि अहिलेको राजनीतिक शक्तिहरू भन्दा फरक दृष्टिकोण, फरक कार्यशैली, फरक संगठनशैली, फरक निर्णय क्षमता, पूर्ण गुणस्तरीय व्यवस्थापन (टीक्युएम), फरक जनपरिचालन चिन्तनबाट आएका हुन् भने मात्र पार्टी स्थापना हुन सक्छ ।
जरामुयनि जतिसुकै मलिलो माटो, प्रांगारिक मल, रासायनिक मल थुपारे पनि जनताले खोज्ने काँक्रो हो, मल होइन । काँक्रो भनेको पद, पैसा र प्रतिष्ठा हो । अझ माथि उठेर राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने शक्ति हो । यसमा पार्टी खोल्नेवालाको दिमाग कति छ भन्ने कुराले धेरै असर पार्दैन । त्यो प्राप्त गर्नका लागि सामान्य छलफलहरू, भद्र सहमतिहरू, कोेठे भेटघाटहरू कति कारागर होलान् ? त्यो समयले बताउने कुरा हो । पार्टी स्थापना घोषणा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धिका खाका पेस गरिने कुरा बुझिएको छ । यी खाका पनि अहिले बजारमा हंगामा मच्चाइरहेका तथा कथित ठूलाबडाका सपनाभन्दा निश्चय पनि धेरै फरक छैनन् होला । यी पत्रांकित र मञ्च गुन्जित सपना जमिनीकरण हुन सक्ने आधार पुख्ता र प्रमाणित भएमा नयाँ शक्तिले जनविश्वास जितेर जनताको मनमा छाप गाड्न सके मात्र पार्टी स्थापना सार्थक बन्नेछ । अन्यथा सबै कुरा एसपको दन्त्यकथामा टुंगिनेछ ।
जे होस्, नयाँ शक्तिको झन्डा, यसका सैद्धान्तिक आधार, त्यहाँ उपस्थित नेताहरूको हाउभाउ, नारा आदिले केही न केही संकेत दिनेछन् कि नयाँ शक्ति कुन दिशातर्फ प्रवाह हुँदै छ । सन् १९८४ मा २ सिट ल्याएको भाजपा अहिले स्पष्ट बहुमतसहित सरकारमा छ भारतमा । गत साल इटालीमा एकजना हास्य कलाकारले खोलेको पार्टीले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । नेपालमा ०१५ सालमा ४ सिट ल्याएका वामपन्थी दलहरूबाट अहिलेसम्म ६ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेको अवस्था छ । सैनिक तानशाहले देश निकाला गरेर अरबमा निर्वासित भएका नवाज शरिफ अहिले सत्तामा छन् पाकिस्तानमा । प्रजातन्त्रको यही सुन्दरताले गर्दा भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन । प्रजातन्त्र भनेको जनतालाई खुला काम गर्न दिने सोच्न दिने र सार्थकता खोज्न दिने तन्त्र हो ।
नेपाली जनतालाई रोजगारी चाहिएको छ र नियमित आमदानी चाहिएको छ । थोरैधेरैको प्रश्न पनि पछिका कुरा हुन् । मानिसलाई सामान्य जीवन निर्वाह हुने नियमित आमदानी सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यस्तो नियमितताको प्रत्याभूति नेपालको सन्दर्भमा सरकारी जागिरबाहेक अन्यत्र निकै थोरै निकायमा मात्र छ । अबको नेपालमा राजनीति गर्नु छ भने रोजगारी सृजना गर्ने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्दछ । बाटो खन्ने नै काम किन नहोस्, त्यसमा पनि उचित समय, उचित तलब, उचित तालिम दिएर नेपालीलाई नै परिचालन गर्ने हो भने जति पनि काम नेपालमै छ । सबै पदासीनहरू ठेकेदारबाट पैसा खाने दाउमा आफ्नै देशमा उपलब्ध कामलाई व्यवस्थित गर्ने पक्षमा छैनन् । यत्ति मात्र व्यवस्थापन गरिदिए नयाँ शक्ति नेपालको पहिलो पार्टी बन्नेछ ।
शनिबार छुट्टी, अरू बार दिनको ८ घन्टा काम गरेर मासिक ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ तलब हुन्छ भने कसले काम गर्दैन ? एमए, बीए जति पढेकाले पनि चट्ट टाई–कोट लगाएर बाइकमा चढेर जान्छ, फिल्डमा कपडा खोलेर त्यहाँको पोसाक लगाउँछ । मजाले काम गर्दछ । एक घन्टा रिफ्रेसमेन्ट लिन्छ, काम सकेर घर फर्किन्छ । पढ्छ, घरको रेखदेख गर्दछ, मनोरञ्जन गर्दछ । त्यस्तो परिपाटी मिलाउने हो भने फास्ट ट्र्याक, रेलमार्गहरू, विद्युत् परियोजना सबै नेपालीले बनाउन सक्छन् । यही तरिकाले पहाडमा महिलाद्वारा अर्गानिक खेती गराएर निर्यात गर्न सकिन्छ । सबै ठेकेदारबाट कमिसन खाएर काम गराउने श्रमको र श्रमिकको अवहेलना गर्ने । कामको सम्मान गर्न नसिकाउने अहिलेको राजनीतिमाझ फरक चिन्तनबाट अगाडि आउन सक्ने हो भने नयाँ शक्तिको पनि विकास हुन्छ, नयाँ नेपाल पनि बन्छ ।
आजसम्म चलेको कर्मकाण्डी तन्त्र, प्रक्रियामुखी कार्यप्रणाली, कामको अवहेलना र कुर्सीमोहभित्रबाट समृद्धि भेटिएला र खोज्न सकिएला भन्ने आशामा मात्र नयाँ शक्ति नलागोस् । यसै वर्षको पौने ४ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च र १ खर्ब रुपैयाँमाथिको वित्तीय व्यवस्थापन खर्चबाटै देशले हजारौं रोजगारी सृजना गर्न सक्छ । तर, गर्ने र गराउने कसले ? नेपालले विश्व बजारमा कफीको माग पूरा गर्न सकेको छैन, चिनीको राष्ट्रिय माग पूरा हुन सकेको छैन । पहाडका डाँडाकाँडा, बारी र चरनहरू खाली बसेका छन् । देशले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका भेडा, बाख्रा र राँगा आयात गरेको छ । खाँचो मात्र राष्ट्रिय चिन्तनको हो । यो समेट्ने मौका नयाँ शक्तिलाई छ । पुराना थोत्रा सपना मात्र भएका पार्टीहरूलाई साइड लगाएर आउन सक्ने हो भने ठूलो मौका छ । होइन भने उही झम्पाट पार्टीहरूझैं चुनावमा बल्छी थाप्ने हो, माछा परे खाने हो, नत्र घाम ताप्ने हो भन्ने पाराले पार्टी खोलिएको भने जुन साधु आए पनि दाह्री पालेको भनौंला । नेपालको सिमानाभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेबाहेक कुनै समस्या नै छैनन् । यदि छन् भने ती आयातीत समस्या हुन् । यत्ति मात्र बुझ्ने शक्ति नेपाललाई चाहिएको छ ।
राजधानी दैनिक वाट
सामाजिक न्यायका लागि सुभास दर्नाल पुरस्कार चमारलाई